Ogaden News Agency (ONA) – Ciidamada Ethiopia oo laayay Muslimiin mudaharaadaysa Oromiya
Ciidamada Ethiopia oo laayay Muslimiin mudaharaadaysa Oromiya
Ugu yaraan 11 qof oo muslimiin ah ayaa lagu dilay Wadanka Ethiopia iyada oo tiro aad u badana ay soo gaadhay dhaawacyo halka boqolaal kalena loo taxaabay xabsiyada, falkan ayaa waxaa geystay ciidanka Woyanaha ee Ethiopia.
Ciidamada Ethiopia ayaa rasaas hoos ugu dhigay muslimiinta Ethiopia oo maalinimadi Jimcaha 03/08/2013 isugu soo baxay banaanbaxyo magaaloyin kamid ah dhulka Oromada magaaliyinkan dadka lagu laayay waxaa kamid ah Kofole, Edoo, Wabe iyo Qore.
Iskahor imaadyadan ayaa dhacay kadib markii shucuubta muslimiinta ee deegamadaas ay Aroorti Jimcaha Banaanbaxyo waaweyn sameeyeen iyaga oo Socdaalkooda kasoo bilaabay Magaalada Waabe kunatagay socdaalkooda Kofale.
Ujeedada banaanbaxan ayaa ahaa inay shacabka Muslimiinta ahi dacwad iyo cabasho u gudbiyeen maamulka Degmada. Waxayna codsanayeen in lasii daayo Imaamyada masaajida deegaankaas oo Ciidamada gumeysiga Ethiopia Xabsiga u taxaabeen. Imaamyadan la xidhay waxaa kamid ah Sheekh Maxamed Cabdallah, Sheekh H/Kadir iyo Sheekh Mukhtaar Saafi. imaamyadan ayaa todobaadkan gudihiisa laga soo qabtay masaajida Wabe ku yaala.
Ciidamada Ethiopia ayaa xabad ku furay dadkaan mudaharadaya islamarkaasna halkaas ku dilay dad kor u dhaafaya 11 qof iyada oo ay jiraan dhaawacyo halis ah oo loo soo qaaday magaalada Shashamane, Ciidamada ayaa sidoo kale xidhay dad aad u tiro badan.
Taliska Woyanaha ee Ethiopia ayaa idaacadaha Ethiopia ka siidaayay bayaamo ay ku sheegayaan in aan loo dulqaadan doonin muslimiinta Ethiopia inay banaanbaxyo sameeyaan, hadii ay isku dayaana ay la kulmi doonaan gacan adag. Hadaba Ciidanka Woyanaha ayaa amar ka heysta taliska Ethiopia inay dadkan sida nabadgalyada ah u mudaharadaya laayaan.
Waxaa Maalintii shalay aheyd la baajiyay Mudaharaadyo waaweyn oo Muslimiinta Ethiopia oo dhan ay isugu soo bixi lahaayeen oo horey loo iclaamiyay, kadib markii gudiga qaban qaabada mudahaaradyadaas iclaamiyay hada ka hor ay ka cabsadeen in muslimiin badan dhiigooda la daadiyo. Iyada oo mida kale ay jirto banaanbaxyo maalinimada ciida ah la isugu soo baxi doono.
Banaanbaxa Maalinka Ciida ayaa wali la baajin waxaana la rajeynaya in 30 million dad kabadan ay banaanbaxyo ku sameeyaan dhulka Ethiopia.